ENEA "ग्रीन थिएटर": खुला हावा चरणमा तेस्रो जीवन
मई 2016 मा सोभियत युग इलाका मा "हरियो थिएटर" मा गर्मी मौसम खुलेको छ। यो भवन सृष्टिको इतिहास सोभियत युग मा सुरु हुन्छ। को प्रदर्शनी केन्द्र "ग्रीन हाउस" मा पहिलो पटक लागि architect Nemtsov अनुसार, 1939 मा बनाइएको थियो। पहिलो थिएटर, साथै प्रदर्शनी नै मा, समाजवादी प्रणाली को विजय प्रबर्धन गर्ने, अस्थायी संरचना रूपमा बनाइएको थियो, त्यसैले पूर्ण काठ बनेको र WCDN र Ostankino पार्क नजिकै स्थित थियो। यसबाट यो शाब्दिक greenery जोडतोडले छ र बस यसको नाम पायो।
को थिएटर को दोस्रो जीवन
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध दौरान, थिएटर, प्रदर्शनी साथ बन्द भएको थियो, र वर्ष पाँच मात्र पछि यसलाई फेरि बनाउनु निर्णय भएको थियो।
आफ्नो Monumental स्ट्राइकिङ् कला साँचो मन्दिर मा थिएटर खोल्न र बनाउन यो मान्छे नजिक थियो पक्का एकै समयमा: The Architect कार्य सेट। काम पहिले नै एउटै Nemtsov को निर्देशन अन्तर्गत 1950 मा शुरू भएको थियो। को प्रदर्शनी केन्द्रमा स्थित भवन, "ग्रीन थिएटर", को architect पूर्ण पुनर्निर्माण, र यो अधिक विशाल र भव्य थियो।
कार्यकर्ता र ईन्जिनियरहरु को एक टोली erected अर्द्ध-गोलाकार Pantheon को रियर मोहरा देखि शीर्ष तल्ला मा निर्माण गरेका छन्, आकार बढेको चरण को पक्ष मा टावर स्थित छन्, तथ्यलाई सुरु, तर दृश्य पछाडि एक मनोरम colonnade निर्माण गरेका छन्। Nemtsov महिमा गर्ने प्रयास र मञ्चमा अब 350 मान्छे सम्म समायोजित गर्न सक्छन्।
को "ग्रीन थिएटर" को उद्घाटन
युद्ध पछि पहिलो पटक, मा ENEA "ग्रीन थिएटर" अगस्ट 1954 मा खोलिएको थियो। मञ्चमा, सोभियत रचयिता द्वारा गीतहरू गाए, "महोत्सव Overture" संगीतकार Glier, कृषि को उपलब्धिहरू, "गीत सुइट" Muradeli र यति मा को प्रदर्शनी को उद्घाटन को लागि लिखित।
को गर्मी मौसम मा प्रदर्शन कलाकारहरूको सफलता विभिन्न प्रदर्शनीहरू भ्रमण पछि, ग्यारेन्टी थियो र सांस्कृतिक मानिसहरू छाया मा आराम र राम्रो प्रदर्शन गर्न सुन्न हतारमा छन्। पोस्टर कृतज्ञ दर्शक भइन् आगंतुकों लोभ्याए। वक्ता लागि यो मंच सबैभन्दा खुसी छलफल।
को थिएटर मा पप कला
1961 को greenery मा डूब, सबै भन्दा को थिएटर लागि महत्वपूर्ण र खुसी भएको छ। यसको पहिलो पटक आधार-संघ पप कला (VTMEI), मुख्य नेता लियोनिद Masliukov छ जो असामान्य रचनात्मक कार्यशाला काम गर्न थाल्छ। यस कार्यशाला स्नातकहरूलाई छन् (आज मेगा कलाकारहरूको) Leontiev, Bogatyrev, Petrosyan, पोलिशचुकलाई, Marusev, stepisty भाइहरूलाई Sazonovs, संसार र अन्य पप स्टार पहिचान जो।
शिक्षकहरू जवान प्रदर्शन गर्ने विभिन्न विधाहरू पप कला हो क्लाउडिया Shulzhenko, लियोनिद Utesov। प्रदर्शन गर्ने को लागि कोठा र पनि सम्पूर्ण कार्यक्रम तयार पारे। को थिएटर मा स्नातक साथै Yosif Kobzon, Arkady Raikin, Lyudmila Zykina थिए। यो ENEA मा फूल चरण थियो। "हरियो थिएटर" को मास्को कुलीन जाँदै, गर्मी, एक जहाँ ठाउँ भएको छ।
अस्वीकारको र पनप थिएटर
80 का "ग्रीन थिएटर" बाट सुरु हुने बिस्तारै जीर्णता मा गिर र यो वित्त भएनन् गर्दा पछिल्लो शताब्दीको 90 को दशक मा पूर्ण बन्द भएको थियो। को थिएटर को तेस्रो पुनर्निर्माण गर्न म जीर्णता मा थियो।
2014 मा, पुनर्निर्माण काम आफ्नो उत्कृष्ट घण्टा पर्खाइ र एउटा आउटडोर थिएटर, ENEA मा सुरु क्रमशः। पहिलो, थिएटर को मोहरा यसलाई हल्का हरियो मा चित्रित अघि, यो नाम संग मिश्रण देखिन्छ, हात्तीदाँतको मूल रंग फर्के। पुनःस्थापित दृश्य आधुनिक प्रविधि संग सुसज्जित छ कि, स्टक्को सजावट को तत्व पुनःस्थापित।
को एम्पिथियटर हामी काठ बेन्चहरूले को रूप मा दर्शक लागि नयाँ सिट राखे। भित्र भवन त्यहाँ एक कम पीठ र "बाख्रा" जो पछि जिम वर्ग मा सोभियत मान्छे कूद एक पूर्वाभ्यास कोठा छ। हल मा त्यहाँ टावर को एक को छत तिर जान्छ कि एक सीढी छ। बाट छत तपाईं सक्नुहुन्छ निर्मित नजिकै मंडप, प्रतिबिम्बित देशको फल र तरकारी उत्पादन। थिएटर दृश्य खुला अगाडि स्थित , Ostankino पार्क को भनेर सबै greenery घेरिएको र धेरै मान्छे को लागि अपेक्षाकृत स्वतन्त्रित सोभियत पटक सम्झना दिलाउँछ छ।
ENEA "थिएटर" कहाँ छ?
मास्को - अनुकूल शहर, र सधैं त्यहाँ नजिकै र टाढा विदेश बाट धेरै आगंतुकों छन्। लोक उपलब्धिहरू को प्रदर्शनी रुचि भएका सबै आफ्नो नेविगेटर यो स्थान सजिलै खोज्न कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। 2015 मा पहिले नै थिएटर मा बोरिस Grebenshchikov थिए यूरी Bashmet, Jivan Gasparyan र अन्य प्रसिद्ध कलाकार। यस लेखमा तपाईं फेला पार्न सक्नुहुन्छ जहाँ प्रदर्शनी केन्द्र "ग्रीन थिएटर"। प्रदर्शनी केन्द्र, संभावना मीरा, 119: निम्न ठेगाना।
मई 9, 2016 को थिएटर रूस Dmitri Hvorostovsky को जनता कलाकार सेवा कि सैन्य गीतहरू द्वारा मौसम पुन खुलेको छ। अलग उहाँलाई, को कन्सर्ट थियो उपस्थित द्वारा फाबिओ Mastrangelo, दिमित्री Kharatyan दानियलले Kozlovsky, लियोनिद Agutin र अन्य तारा पहिलो परिमाण।
मानिसको चासो प्रश्न मा: माथि ठेगाना बाहेक "पारित गर्न कसरी र कन्सर्ट प्राप्त," "को प्रदर्शनी केन्द्र कहाँ छ," ग्रीन थियेटर, तपाईंले स्टेशन "ENEA" गर्न मेट्रो मा प्राप्त गर्न के आवश्यक छ थप्न सक्नुहुन्छ, केन्द्र बाट पहिलो कार सोभियत युग छेउमा गर्न जान्छ। र पनि त्यहाँ मार्गहरू ट्रली (14, 48, 76), रेल (11, 17) र बस (33, 56, 76 र अरूलाई)।
Marlezonskogo ब्यालेट - सबै समय मा राजा वा वाक्यांश लागि मनोरञ्जन?
ओपेराटा थिएटर (Engels): इतिहास, मुग्ध पार्ने संगीतको, troupe
नाटक (ब्रियान्स्क): को थिएटर repertory कम्पनी को इतिहास
थिएटर "नयाँ ओपेरा": इतिहास, मुग्ध पार्ने संगीतको
रूसी नाटक थिएटर (ऊफा): इतिहास, मुग्ध पार्ने संगीतको, troupe, Ticketing
क्रास्नोडार - रेस्टुरेन्ट "रिवेरा"। विवरण, मेनु, समीक्षा
मचान अपार्टमेन्ट: यो के हो? मास्को मा मचान अपार्टमेन्ट
हरेक इच्छुक उद्यमी यी गल्ती बनाउँछ। तिनीहरूलाई कसरी रोक्न?
कसरी सुन्दर सर्कस आकर्षित गर्न?
सहज छत: समीक्षा, मूल्यहरू को प्रकार
मुख्य कारण र neurodermatitis को लक्षण
किन अनलाइन विज्ञापन को प्रभावकारिता को मूल्यांकन?
Orekhovsky अन्य सोची झरने